Fampiharana sy lalao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Fampiharana sy lalao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Averina indray ary aorian'ny fandanianao ny andro Noely, mampahafantatra anao isan'andro izahay momba ireo rindranasa na lalao azo alaina maimaimpoana maimaimpoana hatrany avy amin'ny iPhone News. Ataovy ao an-tsaina fa tsy mampahafantatra anay momba ny fisian'ny fampiharana sy lalao maimaim-poana ny mpamorona, noho izany dia azo inoana fa nandritra ny tontolo andro, ny sasany amin'ireo fampiharana izay asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity, tsy misy maimaimpoana intsony izy ireo ary aloa indray. Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fampiharana 10 sy lalao maimaim-poana.
1 Caveman Dino Rush
3 Alien Apocalypse X
7 Alexa Rank
8 Talesa 2
9 Tsy misy Toerana
Nalaina ankeriny ny vehivavy rehetra tao an-tanàna. Ny iraka ataontsika dia ny hanavotra azy ireo.
WikiLinks no fomba mora indrindra hitetezana fahalalana satria manolotra traikefa vaovao marobe mikasika ny multi-touch amin'ny fikarohana an'i Wikipedia.
Tsy maintsy hatsahantsika izay fanafihan'ny vahiny izay ianjadian'ny tany. Zambo, ilay mpandray anjara mavitrika dia hasiana baomba, basy poleta, basy masinina, basy poleta plasma, flamethrowers ary bazooka hamaranana ity fanafihana ity.
Oddhop dia lalao ankamantatra tsy manam-paharoa, izay toerana misy ny lalao tsirairay amin'ny toerana hexagonal iray misy vondron'olona iray. Ny tanjona dia ny manisy isa amin'ny alàlan'ny fanesorana tsirairay ny zavaboary mandra-paha-iray sisa.
Trimaginator dia aingam-panahy avy amin'ny triangulation noforonin'ilay matematika Boris Delaunay tamin'ny 1934. Nahena ho lasa tena ilaina ny sary, mamadika ny firafitra sy ny singa rehetra ao aminy ho triangles, mampiseho ny valiny izay heverin'ny sasany ho cubism.
Slot, dia lalao an-tsehatra iray izay vahiny mahery vaika sy mahatsikaiky ilay mpihetsiketsika izay tonga teny amin'ny toeram-pitsaboana maika tany amin'ny planeta hafahafa izay tsy maintsy hanombohany ny iraka hanavotana ny mponina ao amin'ny Baby Chicks amin'ny fandrahonana mahatsiravina: vahoaka marobe noana ary ny Lamesa Mpanjaka
Raiso ny laharana Alexa an'ny tranokala amin'ny alàlan'ity fanitarana ity izay napetraka ao amin'ny browser Safari ho an'ny iOS.
Lalao mampientanentana izay hidiranay amin'ny kiraron'i Finn, izay hanana ny iraka hanitarana ny fanjakan'ny Mpanjaka Arnor raha te handresy ny zanany vavy Dahla izy. Ao amin'ny Kingdom Tales 2 dia tsy maintsy miasa miaraka amin'ny fananganana, fizahana, fanangonana, famokarana, fanamboarana ... saingy tadidio foana fa tsy matory i Count Ohli sy ireo mpitsikilony.
Tsy misy Toerana
NoLotacion dia manala ny angon-drakitra misy amin'ireo sary nalainay, ka tsy ho azo atao ny maka ny toerana marina, betsaka na latsaka, avy taiza no nitondranay azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Fampiharana sy lalao maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Toy izao ny Super Mario Run amin'ny endriny freemium
Kingdom Tales 2, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra